မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး အလှထူးပါတဲ့ ရွှေမိုးတိမ်
Home » Photography » မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး အလှထူးပါတဲ့ ရွှေမိုးတိမ်
Posted by ရွှေမိုးတိမ် on Oct 23, 2013 in Photography, Travel | 27 comments
ရွှေမိုးတိမ် ၏ ရိုက်ချက်များ
အဲ…. အလှထူးပါတဲ့ ရွှေမိုးတိမ်ဆိုတော့ ကွကို ပြောတယ်ထင်နေကြဦးမယ် ။ (ထင်ချင်လည်း ထင်ပါစေလေ … ထင်ခံရနည်းလားဆိုပြီး ဒီလိုခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား :-) )
ရန်ကုန် မန်းလေး အမြန်လမ်းပေါ် ရောက်ဖြစ်တုန်း ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ မိုးတိမ်တွေဟာ အဲ့နေ့ က တကယ်ကိုလှတယ် ။ တကယ် ကို ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တယ် ။
တောင်ပူစာလေးရယ် … တိမ်ဖြူဖြူ တွေရယ် ကောင်းကင်ပြာကြီးရယ် …. ကျနော့် မျက်လုံးထဲတော့ အကုန်လှနေတာပဲ ဗျာ
အဝေးက မြင်ရတဲ့ အညာထန်းတော လေး
ဒီပုံထဲမှာတော့ အလှထူးတဲ့ ရွှေမိုးတိမ် တင် မကဘူး ဟယ်လီကော်ပတာလည်းပါတယ်ဗျ
တိမ်ပန်းချီ ၊ စေတီ ၊ သစ်တော…
ခရီးသွားရင် ဒီလိုစေတီပုထိုးလေးတွေ ဖူးမျှော်ရတာလည်း တစ်မျိုးစိတ်ကြည်နူးစရာပါ။
ပုံလေးတွေ ကြည့်ရှု့အားပေးတဲ့ ရွာသူ ရွာသားများ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ။ သွားရင်းလာရင်း ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ရတာမို့ လက်ရာညံ့ဖျင်းမှုကို ခွင့်လွှတ်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှတရားလေးတွေကို ရှုမြင်ခံစားကြပါကုန် :-)
ဘာလို့ ဒီ ပို့(စ) ကျော်သွားမိပါလိမ့်။
ခေါင်းစဉ်ကြည့်တော့ တကယ်ကို ကိုယ့် ဓာတ်ပုံတွေ ပြမယ်မှတ်နေတာ။
ရွှေမိုးတိမ် ကို လှဒယ်ပြောလို့ ရွှေမိုးတိမ် က ကျေးဇူးပါညော်
၁ ကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ…။
ကိုကျော်စွာ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင့် ။ :-)
တိမ်တမန် လေဆန်ကာ တက်ပါလို့
နောက်ခါ ရွှေမိုးတိမ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်တင်…..ဟီဟိ
မောင်သိကြား မြှောက်ပေးဒယ်နော် … မြှောက်ပေးဒယ်နော် ။
ပုဇင်းကနိမ့်နိမ့်ကလေးပျံတာဗျ ။ ပုဇင်း စိမ်း ရော ပုဇင်းဖြူရော တွေ့ခဲ့တယ် ။ ငယ်ငယ်ကဆို လေယာဉ်ပျံတွေ့ရင် ဟေး ဟေး နဲ့အော်ပြီး တာ့တာ ပြတာပဲ ။
ရွာထဲက ဆြာတစ်ယောက်ပြောသွားတာလေး ပြန်ကိုးကားလိုက်ပါအုံးမယ်…
ဓါတ်ပုံဆိုတာ ပြန်မရတော့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တာပါတဲ့…..
တိမ်တွေရဲ့အလှတရားကို မြင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်က ခဏလေးမဟုတ်လား…..ငယ်ငယ်ကဆို လေယာဉ်ပျံတွေ့ရင် ဟေး ဟေး နဲ့အော်ပြီး တာ့တာ ပြတာပဲ ..အဲ့တာလေး အလွန်တူပါတယ်..ခံစားချက်ချင်း….လယ်ကွင်းထဲက ပက်လက်လှန်ပြီး ပျံသွားတဲ့လေယဉ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တာ…အဲ့အကောင်ကြီး မောင်းချင်လိုက်တာပေါ့….အဲ့တာနဲ့ တောသားလေးတစ်ယောက် ကြီးလဲလာရော…မမောင်းရပါဘူး…နီးစပ်တာဆိုလို့ ..လေယဉ်မယ်ဖက်တီးကြီးတစ်ယောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုလာမောင်းနေတာ..ခုထိ….အဟင့်ဟင့်
လေယာဉ်ကြီးမောင်းဖို့ စိတ်ကူးယာဉ်ပြီး လေယာဉ်မယ်နဲ့ ဖူးစာဆုံတာ ဒါ တော်တော်နီးစပ်တာပဲဗျ ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကောင်းပါတယ်ဗျာ ။ ကျနော် ဆို ငယ်ငယ် က ဖေဖေ လက်သမားလုပ်တာကို အရမ်းသနားပြီး ကြီးလာရင် သစ်တောဝန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုပြီး အသံကောင်းဟစ်တာကိုးဗျ ။။။။ ခုတော့ ခုတော့ …. သီတင်းလဲကျွတ်ပြီဗျနော် …
ဟုတ်ပ့ါ လှလိုက်တဲ့ ရွှေမိုးတိမ်။
မမ …. တိမ်ကို ပဲပြောတာပေါ့နော် ။ မီး ကို ပြောတာမှုတ်ဖူးပေါ့နော် ။
ချွေမိုးတိမ် ကို ဂျစ်ဒယ်ဆိုဘာာာလားးး ။
မိုးတိမ် ရွှေရောင်လေးတွေကို ပြောတာဘာာ တဲ့ ။ ဟွင့် ဒီက စောစောစီးစီး ရင်တွေဘာဒွေတုန်သွားတာဘဲ ။
ရွာနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချင်တာကြာပါဘီ ။ သို့သော်ငြား ရောက်ခါစ က ဘာမှသိပ်မသိတော့ ဒီလိုပဲ ဟိုကွန်မန့်ဖတ် ဒီကွန်မန့်ဖတ်ပေ့ါ ။ ၀င်လည်းမရေးတတ်သေးဘူး ။ ခုတော့ နည်းနည်းအကြောင်းသိလာလို့ ခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စစနောက်နောက် နေရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ။ သမီး က ချိတ် မချိုးပါဘူး လို့ :razz:
ဒီကလည်း မိုး အသံကြားရင်ကိုလေ.. မိုးတိမ်လေးကို…… သိပ်ပီး
စစနောက်နောက် ချစ်ချစ်တောက်တောက် နေတတ်တာလေ..
ချိတ်ချိုးပါနဲ့နော်… ဂျိုကာပါမှ.. တစ်ထွေအောင်တာပါကွယ်.. ငိ..
ဂုရော မိုး ကို ချစ်သေးသလားငွင် ကိုရင်စည် ။ တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး မနားတမ်းရွာနေလို့ ရုံးတောင်မလာချင်ဘူးးးးး :mad:
ရွှေမိုးတိမ်လေးက ဒါ့ ထက် ပို လှ မယ် ထင်ပါတီ
( တိမီးကို ဟိုရိုးရာမုန့်လေးတွေ ၀ယ်ကျွေးရင် ချိတ်မချိုးပါဝူးနော်…)
ဟိဟိ …. အရိပ်စစ်လေး က ခန့်မှန်းတာ တော်ထှာ … တိမီးကို မုန့်ဝယ်ကျွေးရမှာပေ့ါ ရိုးရာမုန့်တင်မကဘူး ချားချင်တာ အကုန်သာပြော တိလား
အဲဒီလမ်းကိုသွားရင် မြင်ကွင်းက ရှင်းလင်းနေတော့ ရွှေမိုးတိမ်ရဲ့အလှတွေကို တစ်မျော်တစ်ခေါ် အပြည့်အ၀ခံစားရတာ သတိပြုမိတယ်.. ရန်ကုန်မြို့ထဲနေရတာ..အဲဒီအလှတွေမခံစားရတာကြာပေါ့.. ငယ်ငယ်ကဆို လသာသာညတွေမှာကောင်းကင်မော့ကြည့်ပြီး ကြယ်တွေကိုမှတ်ရတာ.. အခုတော့ အဲဒီကြယ်တွေတောင်မေ့ကုန်ပြီး..ခုနှစ်စင်ကြယ်ဘယ်လိုပုံလည်းတောင်ပြန်ဖမ်းမမိတော့ဘူး.. :))
ဟုတ်တယ် ။ မြို့ထဲက မြင်နေကျ လို မဟုတ် ထူးထူးခြားခြား အလိပ်လိုက်လေးတွေ ကိုယ်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မှာ လှရက်လွန်းလို့ နောက်ခန်းကနေ လက်ကြီးထွက်ထွက်ပြီး တလမ်းလုံးရိုက်လာတာ ။ အိမ်မှာဆို ဓူဝံကြယ်လည်းမမြင်ရ ခုနှစ်စင်ကြယ်လည်းမမြင်ရ လပြည့်ည လမင်းကြီး ကြည့်ချင်ရင်တောင် ၀ရန်ကနေ ကိုယ်တစ်ပိုင်း အတင်းစောင်းခေါင်းထွက် ကြည့်ရတဲ့ ဘွ :-(
တိမ်ကလေးတွေ လှလိုက်တာ ရွှေမိုးတိမ်ရေ…
ပုံဆိုဒ် နဲနဲသေးလို့ ကြည့်ရတာ အားမရဘူးရယ်…
ဟုတ် မအိ …. အားပေးတာကျေးဇူးပါနော် … ပုံတွေမတက်မှာ စိုးလို့ ချုံ့လိုက်တာ လက်လွန်သွားတယ် မအိရယ်။ နောက်ခါတင်ရင် ကြီးကြီးတင်မယ်နော့
တိမ်ညို မိလ္လာ၊ တိမ်စူကာနှင့်
အဟိအဟိ … ၀ုတ်ရားးး အာ့လို